"Kenya waa inay Ciidan milatari ah geyso xadka badda ee ay Soomaaliya kula muransan tahay" - BBC News Somali
"Kenya waa inay Ciidan milatari ah geyso xadka badda ee ay Soomaaliya kula muransan tahay"
Lahaanshaha sawirka OFFICE OF THE MAJORITY LEADER
Image caption Xilidhibaan Aaden Barre Ducaale oo ka tirsan barlamaanka dalka Kenya
Baarlamaanka dalka Kenya ayaa dalbaday in dowladdu ay qaaddo tallaabooyin dheeraad ah oo lagu difaacayo jiritaanka waddanka iyo xuduudaha dhulka iyo badda, waxaana ka mid ah in ciidan milatari ah la geeyo xadka biyaha ee ay ku muransan yihiin Kenya iyo Soomaaliya.
Hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale iyo dhiggiisa tirada laga badan yahay ee aqalka John Mbadi ayaa gudbiyay mooshin ay si wada jir ah u saxiieen labada xisbi ee ugu waaweyn dalka, kaasoo loogu xusul duubayo sidii loo xaqiijin lahaa in Kenya ay xajisato xuduudaheeda.
Labada hoggaamiye ee ugu awoodda badan golaha sharci dajinta ayaa sidoo kale dalbaday in dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay arrintan uga dacwooto golaha amaanka ee Qaramada Midoobay.
Xildhibaannada ayaa laga dhowrayaa in ay ka doodaan mooshinkan, waxaana haddii lagu guuleysto ansixintiisaay dowladdu ku khasbanaan doontaa inay qaaddo dhammaan tallaabooyinka loo soo jeediyay.
Aadan Ducaale oo BBC-da la hadlay ayaan weydiinay in ujeeddadoodu ay tahay inay awood ciidan u adeegsadaan arrin uu kiiskeeda horyaallo maxkamad caalami ah, wuxuuna yiri: "Dastuurka waddanka Kenya wuxuu awood siiyay Madaxweynaha, wuxuu awood siiyay ciidamada milatariga ee Kenya, kuwa badda iyo kuwa cirkaba, wuxuuna farayaa inay waqti kasta ilaaliyaan xuduudaha iyo jiritaanka Kenya, marka haddii la waayo waanwaan diblomaasiyadeed, madaxweynuhu wuxuu ku khasban yahay inuu difaaco dastuurka waddankan ee uu ku dhaartay".
Mudaneyaasha baarlamaanka Kenya ayaa dowladda ku cadaadinaya inay Soomaaliya heshiis kala gasho muranka dhinaca badda, kahor inta uusan go'aan kasoo bixin maxkamadda caddaaladda adduunka ee ICJ.
Maxkamadda ICJ oo go'aamisay siday Soomaaliya rabtay
Lahaanshaha sawirka Radio Risaala
Image caption Xildhibaan Zakariye Xaaji Maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya
Dhinaca kale BBC-da ayaa la hadashay Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, si uu jawaab uga bixiyo tallaabadan iyo sida uu u arko mooshinka la horgeeyay baarlamaanka Kenya.
"Waxaan u aragnaa mooshin habowsan oo jidkiisi ka dhumay, oo Kenya galin doona dhibaatooyin aysan horay u arag, sababtoo ah Soomaali waxeeda haddaad sheegatid, awalba adigoo ka heystay dhul, dad iyo hanti, oo aad haddana intii ay lahayd ku qabsatid, waxay ila tahay inaysan iyaguna nabad gali doonin, way noo billaabaneysaa. baarlamaanka Kenya hadduu xigmad hayo waxay ahayd inuu mooshinkaas joojiyo, oo uu diido", ayuu yiri xildhibaan Zakariye.
Xadka biyaha ee ay labada waddan ee dariska ah ku muransan yihiin ayaa ku fadhiya dhul badeed uu baaxaddiisa la egyahay in ka badan 100,000 oo kilomitir labo jibaaran ah.
Aaggaas ayaa hodan ku ah kheyraadka dabiiciga ah ee gaaska, waana sababta sii hurineysa muranka ku aaddan lahaanshaha.
Dowladda Soomaaliya ayaa horay maxkamadda ICJ ugu gudbisay kiis ku saabsan murankaas, iyadoo ku andacooneysa in Kenya ay boobeyso biyaha Soomaaliya.
Garsooreyaasha maxkamadda caalamiga ah ee uu fadhigeedu yahay magaalada Hague ayaa la filayaa inay go'aanka dacwaddan soo saaraan bisha Sitembar ee sanadkan.
April 7, 2009:- Dowladdii Kumeel Gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Kenya ayaa kala saxiixday heshiis Isfahan ah oo la xiriiray xadka badda ee labada dhinac.
Soomaaliya aya ku doodday in heshiiskaasi uusan sharci ahayn maadaamma uu diiday baarlamaankii Soomaaliya ee xilligaas.
Manta oo ah 17-ka bisha Febraayo, 2019-ka, Danjiraha Soomaaliya ee ku sugnaa Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho, iyadoo hadda ay jiraan shirar arrintan looga hadlayo oo ka socda madaxtooyada Soomaaliya.